Udidi lwePC lokuTshintshela ngokuzenzekelayo
Umlawuli wePC ATS
Udidi lokuTshintshela oluzenzekelayo lweCandelo le-CB
Ulawulo kunye noTshintsho loKhuseleko
I-Generac iphehlelela utshintsho lokuqala oluzenzekelayo kunye nomsebenzi odibeneyo wokujonga amandla ekhaya
I-Waukesha, iWisconsin, nge-27 ka-Matshi 2020 / i-PRNewswire / -Ukucinywa kombane ukusuka kwi-East Coast ukuya kwi-West Coast kukhokelele kwimfuno ekhulayo yejenreyitha yokugcina ikhaya. Ngokunyuka kwemali yombane1, iGeneracⓇ Power Systems (NYSE) yokujonga esweni amandla ombane wePWRview ™ ngokuzenzekelayo ...
Jonga iindawo ezintsha ze-5G ezizisa kwi-Intanethi yeZithuthi kunye nonxibelelwano lweV2X
I-ITProPortal ixhaswa ngabaphulaphuli bayo. Xa usenza ukuthenga ngekhonkco kwiwebhusayithi yethu, sinokufumana ikhomishini yokubambisana. Funda ngakumbi ngoku ukuba sine-Intanethi yetekhnoloji yeZithuthi (V2X), sinombulelo ngokudityaniswa kwetekhnoloji ye-5G kunye nezisombululo zesoftware yeemoto ...
"I-Smart Grid" iya kukhanyisa "iSmart Sudian"
Ngokubanzi, "amandla eSoviet smart" kunye "negridi smart" kubonakala ngathi akunanto yakwenza nomnye nomnye. Ukuba uyawajonga ngokoqobo, la magama mabini ane "smart" ngokufanayo. Kwaye masiqwalasele umxholo wenkampani ethi "Smart Sudian˙ Happiness and P ...
Intsingiselo yophuhliso kunye nethemba lokufumana izixhobo zombane ezisezantsi
1. Umdibaniso othe nkqo Ukuba umenzi uchazwa njengomenzi wezinto zombane ezinamandla ombane ophantsi, oyena mthengi mkhulu weemveliso zombane ezisezantsi zombane sisixhobo esinezixhobo ezinamandla ombane. Aba basebenzisi baphakathi bathenga izixhobo zombane ezisezantsi, emva koko bahlangana ...
Indlela ye-Wei 20, indawo yoPhuhliso lwezoQoqosho, isiXeko saseYueqing, kwiPhondo laseZhejiang, China
IGenac ivula itran yokuqala ezenzekelayo ...
Jonga iindawo ezintsha ze-5G ezizisa ...